Niova ny filaharana: etsy ambony dia Light, eto ambany ny fiainana izay mamorona ny tenany ho endrika isan-karazany momba ny afovoany iray.
Ny foibe no fiainana ary ny afovoany dia maivana, ary ao anatiny, amin'ny alàlan'ny endriny rehetra dia mihazakazaka ny fiainana.
Vol. 1 AUGUST, 1905. Tsia
TEO ny fitsipika lehibe amin'ny tontolon'ny vaovao dia: fahatsiarovan-tena, fihetsika, akora ary fofonaina. Ny antony lehibe na dingana manaporofo ny foto-kevitry ny tontolo vaovao dia: fiainana, endrika, firaisana ara-nofo ary faniriana. Ny zava-bitan'ireo zavatra ireo na ny dingana amin'ny alàlan'ny fisehoana eo amin'ny tontolon'ny fahagagana dia: eritreritra, toetra manokana, fanahy ary sitrapo. Ny fotokevitra, anton-javatra, ary zava-bita, dia farany raisina ho lasa fahatsiarovan-tena. Ny lohahevitra momba ny tontolo noumenal dia nijery vetivety kely. Ny antony voalohany amin'ny tontolon'ny fahagola dia eo alohanay: ny foto-kevan'ny fiainana. raha toa ka ny tsy fahita firy ny fahatsiarovan-tena ny tontolo noumenal.L Ny fahatsiarovan-tena dia ny hevitra momba ny mety rehetra azo atao amin'ny alàlan'ny fanatrehany ny zava-drehetra dia tarihin'ny fanjakana sy ny fepetra mankany amin'ny fanatanterahana farany.
Ny fiainana no fiandohan'ity dingana ity; ny instinct sy ny ezaka voalohany; ny fivoarana amin'ny alàlan'ny fisehoana eo amin'ny tontolo mahagaga. Ny fiainana dia dingana iray; fa tsy ny farany ihany, fa tsy ny farany. Tsy fiainana ny fiainana ao amin'ny tontolon'ny fahagagana; Iray ihany no antony manosika azy io, izany hoe ny tsikombakomba «centrifugal», izay mahatonga ny tontolon'ny zavamaniry dia miova ho endriny rehefa mivoaka avy amina zavatra homogena.
Ny fiainana dia ranomasina mahery iray izay ivoahan'ny Great Breath, nahatonga ny fivoarana avy amin'ny rafitra lalina sy tsy hita maso ao amin'ny tontolo maoderina. Izy ireo dia arakaraka ny onjam-piainana tsy hita maso ho endrika hita maso. Rehefa afaka fotoana kelikely, dia mihodina ny tara, ary miverina amin'ny tsy hita maso daholo. Noho izany, amin'ny fo tsy hita maso ny tontolo dia mihodina ary voasarika indray. Betsaka ny ranomasin'ny fiainana; izao tontolo izao sy ny eo amboniny rehetra dia mitoetra ao anatin'ny iray amin'ireo aradrano ireo. Ny zavatra fantatsika amin'ny fiainana dia ny alalàny fotsiny amin'ny alàlan'ny endrika hita maso, amin'ny fiovan'ny vavany, hatramin'ny tsy hita ka tsy hita.
Zava-dehibe ny fiainana, saingy tsara lavitra noho ny singa izay fantatra fa tsy afaka hanasokajiana ny olan'ny fizika. Ny siansa no mpanao majikan'ny sivilizasiona maoderina; fa ny siansa ara-materialy dia ho faty amin'ny fahazazany, raha tsy mitombo any ambadiky ny fatrany ambany amin'ny tontolon'ny zavaboary izany. Ny nofin'ny fizika dia manaporofo fa vokatry ny fiainana fa tsy antony. Hamokatra fiainana izay tsy misy izy; mifehy ny asany amin'ny lalàna sasany; omeo izany amin'ny faharanitan-tsaina; avy eo dia esory io, tsy hamela ny fomba nahitana azy na oviana na oviana. Misy ny mino fa azo vokarina ny fiainana izay tsy nisy azy; mba hanehoany faharanitan-tsaina; fa ny faharanitan-tsaina dia azo esorina mandrakizay. Fa tsy tokony heverina fa afaka mahatakatra ny fizotran'ny fiainana ny olona toy izany ka mandà ny tsy hino na haminavina momba ny fisiany tsy misy amin'ny endrika. Ny sasany amin'ireo fisehoan'ny fiainana dia ankasitrahana, saingy ireo izay nilaza fa afaka mamokatra ny fiainana amin'ny resaka "inert" dia mbola lavitra ny famahana ny olana toy ny tamin'ny voalohany. Ny famokarana fiainana avy amin'ny raharaha tsy misy dikany dia mety hahitana fa tsy misy resaka «inert», satria tsy misy fiainana afaka mamokatra raha tsy misy ny fiainana. Ny endrika fisehoan'ny fiainana dia mety tsy manam-petra, fa ny fiainana dia misy amin'ny endriny rehetra. Raha tsy kisendrasendra ny olana dia tsy mety miova ny raharaha.
Ny biolojista dia tsy afaka mahita ny niavian'ny fiainana satria ny fikarohana azy dia manomboka sy mifarana raha mandalo ny tontolon'ny endrika ny fiainana. Laviny ny hitady ny fiainana alohan'ny hisehoany, na hanaraka izany amin'ny fombafomba aorian'ny handaozany ny endriny. Ny fiainana dia ilay hery miafina izay miseho amin'ny endrika, fa ny fiainana no antony namolavola endrika: noho izany ny hetsiky ny aina amin'ny fanafoanana sy ny fanamboarana ireo endrika. Ny fiainana no fototry ny fitomboana sy ny fanitarana ny zavatra rehetra.
Ny tanintsika dia toy ny sponjy iray goavambe sy zavamaniry ao anaty ranomasina misy aina. Miaina amin'ny hodin'ity sponjy ity izahay. Izahay dia nateraka tamin'ity onja ity tamin'ny onjan'ny ranomasin'ny fiainana ary rehefa afaka fotoana iray, tao amin'ny ranomaso, dia mamela onjam-pandeha isika ary mizotra, saingy mbola eny amin'ny ranon'ny fiainana. Raha miaina izao tontolo izao ny tontolon'ny tontolo sy ny tontolony, toy izany koa, rehefa miditra ao amin'ny vatana ny saina amin'ny fahaterahana, ny tsirairay dia miditra ao amin'ny ranomasin'ny androm-piainany manokana.
Ao amin'ny fananganana vatana dia mihazakazaka sy manangana arakaraka ny endrika nomanina, ary ny taova fisainana. Ny saina izay mitoetra ao amin'ity vatana ity dia miaina ao anaty fiainana mahatsapa. Ny fandehan'ny fiainana madio amin'ny alàlan'ny vatana fahatsapana dia loko noho ny fanirian'ny saina. Tamin'ny voalohany dia mamaly ny fahafinaretana amin'ny fahatsapana fiainana ny saina. Ny fahafinaretana dia dingana iray amin'ny fahatsapana fiainana, ny fanaovan-javatra hafa dia fanaintainana. Mahafinaritra ny saina rehefa mahatsapa ny fahatsapana fiainana eo amin'ny vatana. Ny fiezahana mampitombo ny fahatsapana fahafinaretana dia miteraka fanandramana rehefa reraka, ireo taova ao anaty saina dia tsy afaka mamaly ny fiainana misy milamina. Ao anatin'izao tontolo izao miharihary dia mieritreritra ny fahafenoan'ny fiainana ary ny eritreritra dia manova ny fiainana ankehitriny.
Miaina amin'ity ranomasin'ny fiainana ity isika, saingy miadana ny fandrosoantsika, satria isika ihany no mahalala ny fiainana satria mandrisika ny saina. Mahafinaritra ny saina mandritra ny fahatsapan'ny saina ary mameno amin'ny alàlan'ny fandalovan'ny fiainana; fa rehefa, amin'ny fampiroboroboana ny saina, tonga hatrany amin'ny fetran'ny fahatongavan-tsaina ny fahatsapan-tena, ka voan'ny fantsom-piainana izy ireo, raha tsy hoe manafaka ny tenany amin'ny saina fotsiny ny saina, dia ahafahany mivelatra ny fahatsapana anatiny. Avy eo dia hitondra azy io avy amin'ny onjam-pihoarana mankany amin'ny fiainana ambony kokoa. Avy eo, ny saina dia tsy voan'ny alàlan'ny fanadinoana ny fanadinoana, ary tsy mitsofoka eo amin'ny vatolampin'ny mason-kenatra ary mahatafintohina azy, fa alefa eo ambonin'ireo fofony ao anaty renirano mamirapiratra, izay ianarany sy mihazona ny fifandanjana ary afaka mihazona azy Mazava ho azy amin'ny fomba rehetra sy ny fiainana.
Tsy mety mijanona ny fiainana. Ity fotoam-piainan'ny fahatsapana ity dia maharitra mandritra ny fotoana fohy. Ny fikatsahana ny sain'ny saina dia hifikitra amin'ny karazana fiainana rehetra ny saina; fa raha mivoatra sy mahatsapa tsara ny tontolon'ny fiainana eto an-tany dia tsy ela izy ireo dia miely. Ireo endrika izay apetraky ny saina hanjavona dia tsy hita na dia rehefa voasambatra aza izy ireo.
Mitady traikefa eo amin'ny fiainana izay hidirany ny saina mba hahafahany mianatra manadihady sy mizotra amin'ny halaliny. Rehefa afaka mikaroka ny halaliny ny saina ary mitazona ny lalany marina manohitra ireo fantsona manohitra rehetra dia tanterahina ny tanjon'ny fiainana. Ny saina dia mandrisika sy manome aingam-panahy avy amin'ireo lantoto manohitra tsirairay avy eo amin'ny fandresena azy ireo. Azony atao tsara ny mampiasa ny sain'ny fiainana rehetra ho an'ny tsara fa tsy miala amin'ny làlany ary mandresy azy ireo.
Ny zavatra fantatsika na fantatsika ankehitriny dia ny fiainana misy endrika izay miova hatrany. Ny tokony hiezahantsika hahafantatra sy miaina dia ny fiainana mandrakizay, ny fahatsapana lehibe izay ny fahatsiarovan-tena.